Maxay ka wada hadleen Ra’iisal Wasaare Sharmaarke iyo Madaxweynaha Galmudug | Baydhabo Online
Maxay ka wada hadleen Ra’iisal Wasaare Sharmaarke iyo Madaxweynaha Galmudug
Ra’iisal Wasaaraha Somaliya, Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke oo Jimcihii gaaray Magaalada Cadaado ee Gobolka Galgaduud, ayaa waxaa uu kula kulmay Madaxda Maamulka Galmudug.
Ka dib kulan muddo saacado qaatay oo ay ku yeesheen Madaxtooyada Magaalada Cadaado, ayaa waxaa si wada jira Saxaafadda ula hadlay Madaxweynaha Galmudug, C/kariin Xuseen Guuleed iyo Ra’iisal Wasaaraha Somaliya.
Madaxweynaha Galmudug oo hadalka ku horeeyay, ayaa sheegay in Ra’iisal Wasaaaruhu uu ugu yimid, sidii Galmudug iyo Puntland ay u joojin lahaayen dagaalka Magaaalda Gaalkacyo.
Madaxweynaha, ayaa markale ku celiyay in Galmudug ay dhinaceedu diyaar u tahay in colaadda Gaalkacyo lagu xaliyo wanaag, nabad iyo derisnimo, iyadoo la xoojinayo heshiiskii labada dhinac ay bishii November ku wada gaareen Magaalada Gaalkacyo.
C/kariin Xuseen Guuleed, ayaa intaa ku daray inay ka xun yihiin dadkii ku waxyeeloobay dagaalka iyo intii ku barakacdayba, iyadoo dhinaca kalana uu rajo ka muujiyay in dadaalka uu Ra’iisal Wasaaruhu wado uu noqdo mid mira-dhala.
Ra’iisal Wasaaraha Somaliya oo hadalka qaatay, ayaa Madaxda Galmudug iyo dadka deegaankuba kaga mahadceliyay, sida diiran ay ugu soo dhaweeyen Xarunta KMG ee Galmudug.
Ra’iisal Wasaaraha, ayaa ku waramaya sababta ay u yimaadeen Cadaado inay soo dedejisay, iyadoo lagu jiro xilli dalka looga diyaar-garowbayo doorasho iyo dagaalka ka soo cusboonaaday Gaalkacyo.
Ra’iisal Wasaaraha, ayaa ku baaqay nabad iyo in la soo afjaro dhiilada colaadeed ee ka taagan Magaalada Gaalkacyo, lagana fogaado wixii xanaf ah ee dagaalka sii hurin kara.
Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke, ayaa sidoo kale rajo wanaagsan ka muujiyay in la soo noolleeyo heshiiskii labada maamul sanadkii hore ku wada saxiixdeen Magaalada Gaalkacyo.
Ra’iisal Wasaare Sharmaarke, ayaa ugu dambeen dadka wada dhashay ee reer Gaalkacyo ugu baaqay inay ka fogaadan wax kasta oo keeni kara colaad iyo dhibaato. Puntland iyo Galmudugna ay miiska wada hadalka isugu yimaadan, si dagaalka looga gudbo.